Galaxy Watch Active avy amin'i TOUS Review | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | hevitra, SmartWatch
Androany isika dia miresaka gadget manokana ho an'ny mpijery vehivavy. Nanam-bintana izahay fa afaka nizaha toetra nandritra ny andro vitsivitsy ny smartwatch niarahan'ny orinasa firavaka malaza TOUS sy Samsung dia miray hery mamorona vokatra tsy manam-paharoa amin'ny kinova voafetra. Fitaovana iray izay ahazoan'ny teny wearable ny heviny feno.
Akanjo miaraka amin'ny TOUS ny Galaxy Watch Active mamorona kinova glamorous an'ny iray amin'ireo smartwatches feno indrindra eny an-tsena. Ary nanjary niavaka kokoa ny fahafantarana fa miresaka izany fanontana voafetra izay "manidina" ny tarika alohan'ny hahatongavany any amin'ireo magazay ara-batana aza. Raha ny marina, taorian'ny roa herinandro nanombohany, lany tahiry ankehitriny.
1 Ny TOUS avy amin'ny smartwatch Samsung
3 Volavola TOUS 100% ho an'ny tananao
4 Akanjo misy marika Galaxy Watch Active
5 Data sheet Galaxy Watch Active nataon'i Tous
6 Ny mahatsara sy maharatsy ny fiambenana Watch Galaxy an'ny Tous
6.3 maharatsy ny mifampiresaka
Ny TOUS avy amin'ny smartwatch Samsung
Ny firesahana momba an'i Samsung sy ireo smartwatches farany nataony dia miresaka momba ny kalitao. Rehefa miloka amin'ny fitaovana iray ilay mpanamboatra Koreana dia asehony izany, ary miaraka amin'ny kinova farany an'ny Galaxy Watch Active dia miharihary izany. Izahay dia teo aloha smartwatch feno miaraka amin'ny fampisehoana amin'ny haavon'ny tsara indrindra eny an-tsena isalasalana fa.
Avy amin'ny Samsung no tadiavin'izy ireo Mitsangàna indray mandeha fotsiny ho an'ny Apple Watch, ary mazava fa miaraka amin'ireo maodely vaovao dia eo am-pahatanterahana izany izy ireo. Amin'ity maodely ity, avy amin'ny tanan'ny firavaka malaza sy ny accessories TOUS indray, Samsung dia lasa tsara tarehy mahatratra ny sehatry ny besinimaro manana pototra be.
Isaky ny miresaka momba ny azo itondra isika mieritreritra fehin-tanana atao hetsika isika, na mazava ho azy smartwatches. Ary angamba amin'ny gadget hafa tsy dia mahazatra loatra izay mbola tsy nahavita nifampitsimbadika teny an-tsena. Saingy matetika misy hevitra momba ny fitaovana fanatanjahan-tena tonga ao an-tsainao. Ary na dia miaraka amina fironana ho an'ny besinimaro.
Samsung, miaraka amin'ity fiarahany miasa faharoa amin'ny orinasa TOUS ity, manazava tsara ny mpihaino vehivavy. miaraka fiaraha-miasa izay mampiray ny endrika kanto indrindra amin'ny haitao faran'izay avo indrindra mitondra ny smartwatches ho eo amin'ny sehatra tsy dia misy vokatra loatra amin'ny tsena amin'ny gadget na akanjo azo anaovana.
Fotoana famelana ny boaty ity maodely manokana an'ny Galaxy Active Watch ity. Ilay boaty ihany dia efa natokana ary hitantsika eo anoloana, amin'ny litera volamena lehibe, ny sary famantarana TOUS. Ao anatiny no ahitantsika ny famantaranandro, izay ao amintsika no maodely miaraka 40mm dial volamena miloko.
Ho fanampin'ny famantaranandro, izay misy a fehin-tànana voaravaka bera TOUS mahazatra, hitantsika fehin-tànana iray hafa mitovy endrika nefa mainty. Antsika ny cbatery mpamono vy misy tariby mainty. Ary farany, a torolàlana fohy fohy ho an'ny torolàlana sy antontan-taratasy mifandraika amin'ny fiantohana.
Volavola TOUS 100% ho an'ny tananao
Raha reraka ianao na reraky ny mitady fitaovana elektronika manana ny maha izy azy ary endrika tsy manam-paharoa sy mahafinaritra, ny TOUS nataon'i Samsung dia natao ho anao. Araka ny efa nomarihinay dia azo ampiharina izy ireo safidy tsy misy eny an-tsena izay mitambatra a fitaovana matanjaka sy avo lenta, miaraka amin'ny famolavolana endrika vehivavy miavaka.
Ity fanontana voafetra Galaxy Watch Active ity dia manasongadina ny vatan'ny fiambenana vita amin'ny metaly metaly misy famaranana volamena manjelanjelatraary. Ary mba hamitana ny fanaingoana TOUS, ankoatry ny fananana andian-antso manokana, dia mahita a fehezana silipo mavokely voaravaka bera enigmatika an'ny marika.
Ireo fehikibo dia manana ny "tusho" mahazatra mba hosoloina mora foana. Afaka manao izany isika ampiasao ny tadiny roa ananantsika ao anaty boaty. NA fehikibo hafa ao amin'ny fianakaviana Galaxy Watch Active. La TOUS strap strap dia manana loko volamena mitovy amin'ny dial ka lavorary ny fitambarana.
Ho fanampin'ny fehy mavokelymanana isika iray hafa, voaravaka bera TOUS, miloko mainty. Azonao atao ny manambatra azy ireo amin'ny fijerinao amin'ny fotoana rehetra. Farany famantaranandro izay manome fampisehoana ambony indrindra mikendry fanaovana asa ara-batana sy fanatanjahan-tena. SAINGY fitazonana fomba sy famolavolana mahazatra ary kanto Tsy miala amin'ny toerana ivelan'ny gym izany.
Akanjo misy marika Galaxy Watch Active
Aza mieritreritra fa ity smartwatch ity, amin'ny alàlan'ny fahatsoran'ny firavaka firavaka, dia nandao ny toetra mampiavaka azy. Ny mombamomba ny Galaxy Watch Active dia 100% ankehitriny, ary zavatra miavaka io raha vantany vao manomboka mitsabo azy isika. Ny traikefan'ny mpampiasa izay mihoatra ny smartwatch manisa isa tsotra izao.
Araka ny fantatsika, Samsung dia nanome ity Galaxy Watch Active ity ny teknolojia rehetra amin'izao fotoana izao mba hifaninana aminao mankany aminao manoloana ny smartwatch misy anao. Misaotra an'i ny fanaraha-maso foibe, efa ny fampiharana Asa atao isan'andro, hainay manara-maso ny haavon'ny fanatanjahan-tena isan'andro. Ary miaraka amin'ny fampiharana Samsung Fahasalamanatafiditra ao anaty famantaranandro ianao, afaka miditra fanjifana kaloria, kilometatra nandeha na haavon'ny fivezivezena izay entinao hatreto.
Ho fanampin'ny fanaraha-maso ny hetsika isan'andro sy ny rindranasa zanatany rehetra, na azonay apetraka amin'ny fampiasanao. Ny Galaxy Watch Active mitazona antsika hifandray amin'ny fotoana rehetra. Hafatra, antso, fanairana, fanairana amin'ny fampiharana ... ny fampahalalana rehetra amin'ny fihodinanan'ny tanana. Ny efijery dia manolotra famakiana mahafinaritra sy haingana na dia amin'ny andro antoandro aza. Mandra-pAzonao atao ny mamaly hafatra amin'ny alàlan'ny baiko na amin'ny alàlan'ny kitendry kely nefa mora ampiasaina.
Data sheet Galaxy Watch Active nataon'i Tous
modely Galaxy Watch Active an'i Tous
efijery 1.1-mirefy Super Amoled
vahaolana 360 x 360 pika
Tsy tantera-drano Fanamarinana IP68
Bluetooth 4.2 fanjifana ambany
Azo asitrika ATM hatramin'ny 5
Mpamaky ny tahan'ny fo SI
Sensor jiro manodidina SI
Fifandraisana NFC SI
Wifi Tarika 802.1 2.4 GHz
Fahatsiarovana RAM 700 MB
fitehirizana 4 GB
Fiampangana tsy misy tariby SI miaraka amin'ny Qi standard
lafiny X X 39.5 39.5 10.5 MG
Haben'ny dial 28.1 milimetatra
lanja Gramin'ny 25
Ny mahatsara sy maharatsy ny fiambenana Watch Galaxy an'ny Tous
Volavola manokana natokana ho an'ny mpihaino vehivavy, tonga ny fotoana!
lanja hazavana ultra, tsy ho hitanao fa manao azy amin'ny fiainanao andavanandro.
La efijery Manolotra famahana vahaolana mihaja kokoa izy io ary hita amin'ny lafin'ny tontolo iainana rehetra.
Ny rafitra famerana Miaraka amin'ny charger magnetized dia tena mampahazo aina izy, tsy lazaina intsony hoe mampahazo aina azy raha manana charger tsy misy tariby isika.
El Rafitra miasa Tizen OS mora ampiasaina, intuitive, ary mikoriana tsara amin'ny famantaranandro.
La fizakan, indrindra raha mampiasa ny GPS sy ny monitor ny tahan'ny fo isan'andro isika, dia toa somary zara aza.
El Price, Na dia smartwatch misy sora-baventy aza izy ary mahafeno naoty amin'ny lafiny iray aminy, dia toa avo kokoa noho ny fanaon'ny TOUS io.
Galaxy Watch Active avy amin'i TOUS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Galaxy Watch Active nataon'i TOUS hevitra
Ireto ny sary fampiroboroboana ny Redmi K30 izay mampiseho azy tanteraka
Bubble Tale dia sehatra tsara indrindra ahafahana mampiasa rano miboiboika mankaiza